Ithegi: izibalo ze-imeyile eziphathwayo | Martech Zone
Ithegi: izibalo ze-imeyile ezihambayo
Imfono yokuGqithisela i-Desktop ye-imeyile ivula
NgoLwesibini, Juni 19, 2012 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 UAdam Omncinci
Andikholelwa ukuba ndohlukile kunabantu abaninzi. Ndijonga i-imeyile imini yonke kwi-iPhone yam ukuze xa ndifika emsebenzini, ndikwazi ukugxila kwimiba ebaluleke kakhulu. Isixhobo sam esiphathwayo sisixhobo sam esiphambili ekuvuleni nasekuhleleni imiyalezo endiyifumanayo. Ewe akunakulimaza xa ezo imeyile zenzelwe izixhobo zeselfowuni. Ukuba ufuna uncedo olongezelelekileyo lokufumana i-imeyile yakho ukuba ibe nobubele kwiselula, yiba yiyo
Kunye nabantu abakhulu (kunye nabaxhasi), iDelivra… siphuhlise le infographic emangalisayo enayo yonke into obukade ufuna ukuyazi malunga nendlela abantu abasebenzisa ngayo iselfowuni ukufikelela kwii-imeyile zabo. I-Delivra ibonelela ngeenkonzo zokuthengisa nge-imeyile kunye neqonga labo. Bayinkampani engakholelekiyo enabantu abathandekayo ababakhathalele ngokwenene abathengi babo. Ukuthengiswa kwefowuni akuyi kuhamba naliphi na ixesha kungekudala! UDelivra ufuna ukukunceda ulungiselele iinzame zakho zokuthengisa nge-imeyile kwaye ufumane
Yiba ngumSamariya Ogaxekile!
NgoMvulo, Matshi 15, 2010 NgoMgqibelo, ngoJuni 27, 2015 UBill Dawson
I-Spam Samaritans ayisebenzisi kuphela iiakhawunti zabo ze-imeyile ukunxibelelana, kodwa ikwafaka igalelo ekupheliseni ugaxekile kwabanye. Kwimpelaveki ephelileyo umazala wam wayechaza indlela amshiya ngayo kuYahoo! iakhawunti ye-imeyile kwaye wafudukela kwi-Gmail, kuba yayiyi, "yonke igcwele i-SPAM kwaye ayinakufundwa." Into angakhange ayiqonde kukuba le ndlela yokuziphatha ibenzakalisa ababoneleli ngeenkonzo ze-Intanethi (i-ISPs), abathengisi kunye nabagaxekile ngokufanayo. Ababoneleli ngeNkonzo ye-Intanethi (ISPs) bafuna ingxelo yokuphucula amava akho e-imeyile. Ngaphandle
Kutheni uhamba noMboneleli weNkonzo?
NgoMvulo, Februwari 4, 2008 NgoLwesibini, Februwari 5, 2008 Douglas Karr
Kungumceli mngeni ukuthetha nenkampani enezixhobo ezinamandla ze-IT kwaye ubenze ukuba bathenge kwimodeli ye-ASP. Uninzi lwabantu lukholelwa ukuba umahluko phakathi kwe-ASP kunye nenkampani yesoftware yelifa kukuba umntu ukhupha isoftware ukuze umthengi ayiphathe kunye nokunye ukukhutshwa kwi-Intanethi apho isicelo kulula ukusigcina. Ukujonga kumzi mveliso ngale ndlela, bobabini bajongeka njengeenkampani zesoftware. Ayinakuba njalo